ပြင်သစ် ဘာသာ လေ့လာစရာ (အပိုင်း ၅) – Maung Paris | MoeMaKa Burmese News & Media
ပြင်သစ် ဘာသာ လေ့လာစရာ (အပိုင်း ၅)
Lesson 45( Leçon5)
ပါရီမောင်၊ မတ် ၆၊ ၂၀၁၃
Lesson5( Leçon5)
Les Verbes ( Verb ) ကြိယာများ
Verbe Conjugaison (သုံးစွဲသည့် ကတ္တားပုဒ် နှင့် ချိန်ညှိ ပေးခြင်း Verb Form အကြောင်း)
သက်ရှိ သို့ မဟုတ် သက်မဲ့ အရာဝထ္တု တခု၏ လုပ်ဆောင်မှု ၊ ဖြစ်တည်မှု ၊ တည်နေရာ စသဖြင့် ပြဆို ခြင်းများ ကို Verbe များကဖေါ်ပြ ကြပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် ကတ္တား ပုဒ်တခု၏ လုပ်ဆောင်မှု ကို ကြိယာ ပုဒ် Verbe များက ဖေါ်ပြနေပါသည်။ကြိယာများသည် လှုပ်ရှားမှု သဘောပါသော ကြိယာများ (ဥပမာ -ပြေးသည်၊ တက်သည်၊ လာသည်၊ ခုန်သည် ) နှင့် လှုပ်ရှားမှု မပါဝင်သော ကြိယာများ (ဥပမာ – တွေးတောသည်၊ ဖြစ်သည်၊ ထင်ရသည်၊ ကြံစည် သည် ) ဟူ၍ အနေနှင့် သဘာဝ ၂ မျိုးတွေ့ရှိရသည်။
ပုံမှန်ဝါကျများ သုံးစွဲရာတွင် ကြိယာ Verbes များသည် ကတ္တားပုဒ် Sujets များ၏ အနောက်တွင်သာ ရှိနေရပါမည်။
( ဥပမာ – Je regarde un film. ) စာကြောင်းတွင် Je သည် ကတ္တားပုဒ် ခေါ် Sujet , regarde သည် ကြည့်သည် ဆိုသော ကြိယာ Verbe ဖြစ်သည် ။
ရှေ့က သင်ခန်းစာတွင် ရေးခဲ့သလို Verbe တခုကို အဘိဓါန်တွင်တွေ့သည့်အတိုင်းတိုက်ရိုက်သုံး၍ မရပါ။ သက်ဆိုင်ရာ ကတ္တားပုဒ် အလိုက် Conjugaison ဥပဒေသများ အတိုင်း ချိန်ညှိပေးပြီး စာကြောင်း တည်ဆောက်ရပါမည်။
ဥပမာ – ကြည့်သည် ဆိုသော look , watch ကို Dictionary တွင်ကြည့်သောအခါ “regarder” ဟုတွေ့ပါမည်။ မူရင်း အတိုင်းဖြစ်နေသော Verbe Infinitif ကိုသာတွေ့ရပါမည် ။
Verbe များကိုVerbe Transitif နှင့် Verbe Intransitif ဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်ပါသည် ။
Verbe များ၏ အဆုံးသတ် စာလုံးကို ကြည့်ပြီး အုပ်စု (၃) စု ခွဲ ခြားထားပါသည် ။
Verbe Conjugaison မှန်ကန်စွာ လုပ်နိုင်ရန် အတွက် မည်သည့် အုပ်စုတွင်ပါ ဝင် သည် ဆိုသည်ကို သိထား ရမည့်အပြင် ပုံမှန်မဟုတ်သောVerbe အချို့ ၏Conjugaison ပုံစံများကိုတော့ အသေ မှတ်ထားရပါမည်။ ပြင်သစ်ဘာသာ စကားကို ပြော ဆို၊ ရေးသား၊ သင်ယူ လေ့လာနေသမျှ မှန်ကန်စွာ သုံးစွဲ သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁ ။ ” …er ” ဖြင့် အဆုံး သတ် သော Verbeကြိယာများ သည် Conjugaison လုပ်ရန် အလွယ်ဆုံး ဖြစ်ပြီး အုပ်စု (၁) ဟုသတ်မှတ်ထားပါသည်။
၂ ။ ” …ir ” ဖြင့် အဆုံး သတ် သော Verbeကြိယာများ ထဲမှ အချို့ သည် အုပ်စု (၂ ) တွင် ပါဝင်ပါသည်။
၃ ။ ” …ir ” ဖြင့် အဆုံး သတ် သော Verbeကြိယာ အချို့၊ “..re” ” …yer” “…oir “ ဖြင့် အဆုံးသတ်သော ကျန်ရှိ ကြိယာများသည် အုပ်စု (၃) တွင် ပါဝင်ပါသည်။
အလွယ်ဆုံးဖြစ်သော အုပ်စု ၁ ၏ ကြိယာများကို ဥပမာပေးရလျှင် ( ရှေ့ သင်ခန်းစာမှ regarder ဆိုသော ကြည့်သည် ဆိုသော ကြိယာကို သက်ဆိုင်ရာ လူပုဂ္ဂိုလ် နာမ်စားများ နှင့်တွဲပြီး
Conjugaison လုပ်ကြည့်ရအောင် …….( ပစ္စုပ္ပန် ကာလအချိန်ပြပုဒ် အတွက်သာ ) Présent
Regarder ( verbe Infinitif ” watch, look “) ကြည့်သည်
မင်း၊ခင်ဗျား၊ရှင် ကြည့်သည် မင်းတို့၊ခင်ဗျားတို့၊ရှင်တို့ ကြည့်ကြသည်
Il/ Elle regarde Ils/ Elles regardent
သူ ၊ သူမ ကြည့်သည် သူတို့ ၊ သူမတို့ ကြည့်ကြသည်
အထက်ပါ ပုံစံ ( Verbe Conjugaison ) ကိုကြည့်လျှင် သက်ဆိုင်ရာ ကတ္တားပုဒ် များအတွက် သုံးထားသော ကြိယာများ ၏ အဆုံးသတ်များသည် “e , es,e” တို့သည် အနည်းကိန်း ဖြစ်သော ပထမ၊ဒုတိယ၊တတိယလူ များအတွက် ဖြစ်ပြီး ” ons, ez, ent ” တို့သည် အများကိန်း ဖြစ်သော ကတ္တားပုဒ် များ အတွက်ဖြစ်သည်။ အဆုံးသတ် စာလုံးများကို ပုံသေမှတ်ယူရပါမည်။
ထို့ကြောင့် Je သည် ပထမလူ၊ အနည်းကိန်း Nous သည် ပထမလူ၊ အများကိန်း
Tu သည် ဒုတိယလူ၊ အနည်းကိန်း Vous သည် ဒုတိယလူ၊ အများကိန်း
ll/ Elleသည် တတိယလူ၊ အနည်းကိန်း Ils/ Ellesသည်တတိယယလူ၊ အများကိန်း
နောက်ထပ်နမူနာ သီချင်းဆိုသည် ကြိယာ “Chanter” ကို အောက်ကလင့်မှာကြည့်ပါ။ မူရင်းကြိယာဖြစ်တဲ့ Verbe Infinitif ကို Chanter ရှော့န်တေ လို့ အသံထွက်ပါတယ်။
အသုံးများ တဲ့ကြိယာတွေ ဖြစ်ပြီးအလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ အုပ်စု (၁) ဝင် အောက်ကပေးထားတဲ့ Verbes တွေကို လေ့ကျင့်ခန်းအနေနဲ့ ကိုယ်တိုင် ချရေးကြည့်ပါ။ Verbe Conjugaison လုပ်ပါ ။ အားလုံး သည် verbe infinitif ဖြစ်သည်။ အသံထွက် အမှန်နှင့် အဖြေ ကို သိရှိရန် Youtube တွင် ပြန်ကြည့်ပါ ။
ဥပမာ ” verbe parler conjugaison ” ဆိုပြီးရိုက်ရင် http://www.youtube.com/watch?v=b42hXdt6V1E
parler : ပါ့ခ်လေ ( ပြောသည် )
commencer : ကွန် မွန် စေ ( စသည်. စတင်ပြုလုပ်သည် )
ranger : ရောန့်ဂျေ ( သိမ်းဆည်း သည် )
habiter : အာဘိတေ ( နေထိုင် သည် ) h အသံသည် ထုံးစံအတိုင်း ဖျောက်ထားပါသည်။
travailler : ထရာဗိုင်ယေ ( အလုပ် လုပ် သည် )
écouter : အေးကူတေ ( နားထောင် သည် ) သရများ၏အပေါ် မှ သင်္ကေံတများကို သတိထားပါ
fermer : ဖဲ့ခ်မေ ( ပိတ် သည် )
laver : လာ ဗေ ( ဆေးကြော သည် )
lever : လက်ဗေ ( ထူမ သည် )
marcher : မာ့ခ်ရှေ ( လမ်းလျှောက်သည၊် ကြိတ်ဝါးသည်၊ အလုပ်ဖြစ်သည် ) သုံးနှုံးပုံ များကွဲသည်
tourner : တူးန်ခ်နေ ( လှည့် ပါတ် သည် )
retourner : ရ တူးန်ခ်နေ ( တနေရာမှ ပြန်သည် ၊ပြန်လည် လှည့် ပါတ် သည် )
rentrer : ရောန့် ထရေ ( အိမ်သို့ ပြန် သည် )
brancher : ဘရောန့်ရှေ ( တပ်ဆင် သည် ) မီးကြိုး၊ တယ်လီဖုံး ကြိုးကိုပလပ်ခေါင်းတွင်တပ် ခြင်းမျိုး
débrancher : ဒေဘရောန့်ရှေ (ဖြုတ် သည် ) မီးကြိုး၊ တယ်လီဖုံး ကြိုးကိုပလပ်ခေါင်းမှ ဖြုတ် ခြင်းမျိုး
assembler :အ စွန် ဘလေ (တပ်ဆင်သည်) monter လဲသုံးသည်။ အစိတ်အပိုင်းပစ္စည်းများ ကို တပ်ဆင်သည်
connecter : ကွန်နက်တေ ( ဆက်သွယ်သည်၊ တပ်ဆင်သည် ) မီးကြိုး၊ တယ်လီဖုံး ကြိုးကိုပလပ်ခေါင်းတွင်တပ် ခြင်းမျိုး ၊ အင်တာနက် ဆက်သွယ်သည်။ ( la connection : အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်)
déconnecter : ဒေကွန်နက်တေ ( ဆက်သွယ်၊ တပ်ဆင်မှု ကိုဖြတ်တောက်သည် ) ဆန့်ကျင်ဘက်
contacter : ကွန်တပ်တေ ( ဆက်သွယ်သည်) လူချင်းဆက်သွယ်မှု
téléphoner : တေလေဖိုနေ ( ဖုံးဆက်သည်)
préparer : ပရေ ပါရေ ( ကြိုတင် ပြင်ဆင်သည်)
imaginer : အီမာဂျီနေ ( စိတ်ကူး သည် ၊မှန်းဆသည် )
dessiner : ဒေစီနေ ( ပုံဆွဲ သည်) “s” ၂ လုံးဖြစ်လျင် “s”သံထွက်သည်ဟု ယေဘူယျမှတ်ပါ
cuisiner : ကွီ ဇီ နေ (ချက်ပြုတ်သည်) “s” ၁ လုံးဖြစ်သောကြောင့် “z” သံထွက်ရပါမည်။
( ကြုံသလို ကြိယာများ ထပ်ပေးသွားပါမည် ။ ကြိယာတိုင်းကို ဖြစ်နိုင်လျှင် Youtube တွင်အသံ ထွက် မှန်အောင် လေ့ကျင့်ပါ ။ ကြိယာတိုင်းကို ပုံစံ အဖြစ် အထက်က အတိုင်း Regarder verbe ကဲ့သို့ ကိုယ်တိုင် ချရေးပါ ။
ကြိယာ အုပ်စု ၃ ခုတွင် မပါဝင်ပဲ သီးခြားဖြစ်သော အရေးကြီးသည့် ကြိယာ ၂ ခုကို ခေါ်ပြလိုပါသည်။
၄င်းတို့မှာ ဖြစ်ခြင်းပြကြိယာ ” être “ ( verb to be ) နှင့် ရှိခြင်းပြ ကြိယာ ” avoir “ ( verb to have ) ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကျနော့်မှာ ညီတစ်ယောက် ညီမ နှစ်ယောက်ရှိတယ် ၊ သူမသည် ပြင်သစ်စာ ဆရာမဖြစ်တယ် ၊ သူသည် ကြင်နာတတ်သည် … စသည်ဖြင့် ရှိခြင်း၊ ဖြစ်ခြင်းတို့ကို ပြဆိုသော ကြိယာအနေနှင့် သုံးရန်သာမကပဲ အတိတ်ကာလ အချိန်ပြပုဒ် Past Tense အပါအဝင် အခြား အချိန်ပြပုဒ်တွင် သုံး ရာတွင် အကူ ကြိယာ Verbe Auxiliaire အနေနှင့်သုံးရမည် ဖြစ်သောကြောင့် ” être ” နှင့် ” avoir “ တို့၏ Verbe Conjugaison ကို မပိုင်နိုင်ခဲ့လျင် အချိန်ကာလ ညွှန်ပြသော စာကြောင်းများတည်ဆောက်ရန် ခက်ခဲပါမည်။
être အက်ထ် ၊ ဖြစ်သည် Verb ” be ” ( အရေးကြီးပါသည်)
Je suis ရဆွီ Nous sommes နူ ဆွမ်း မ်
ကျနော်၊ ကျမသည် …ဖြစ်သည် ကျနော်တို့၊ ကျမတို့ သည် …ဖြစ်ကြသည်
Tu es ကျူ အေ Vous êtes ဗူ ဇက် ထ်
ခင်ဗျား၊မင်း၊ ရှင် သည် …ဖြစ်သည် ခင်ဗျားတို့၊မင်းတို့၊ရှင်တို့သည် …ဖြစ်ကြသည်
Il / Elle est အီလေ ၊ အယ်လ်လေ Ils / Elles sont အီဆွန်န့် ၊ အယ် ဆွန့်န်
သူ၊သူမ သည် …ဖြစ်သည် သူတို့၊ သူမတို့ သည် …ဖြစ်ကြသည်
(လင့်မှာ il est/ elle est အပြင် on est ဟု တွေ့ ရမည်။ ပုဂ္ဂိုလ် အတိအကျ မဖေါ်ပြပဲ သုံးသည်။ စာကြောင်းများ လုပ်ရင်း ရှင်းသွားပါမည်)
avoir အာ ဗွား ၊ ရှိသည် Verb ” have ” ( အရေးကြီးပါသည်)
J‘aiရေ Nous avons နူ ဇာ ဗွန်
ကျနော့်မှာ၊ ကျမမှာ …ရှိသည် ကျနော်တို့၊ ကျမတို့မှာ …ရှိကြသည်
Tu as ကျူ အာVous avez ဗူ ဇာဗေ
ခင်ဗျားမှာ၊မင်းမှာ ၊ ရှင့်မှာ …ရှိသည် ခင်ဗျားတို့မှာ၊မင်းတို့မှာ ၊ရှင်တို့မှာ…ရှိကြသည်
Il / Elleaအီ လာ ၊ အယ်လ်လာ Ils / Elles ont အီဇွန်န့် ၊ အယ်ဇွန့်န်(“ဆ”မဟုတ်)
သူ့မှာ၊သူမမှာ …ရှိသည် သူတို့မှာ၊ သူမတို့မှာ …ရှိကြသည်
နောက် သင်ခန်းစာတွေမှာ စာကြောင်း တည်ဆောက်နိုင်ရန် အတွက် ဂဏန်းရေတွက်ပုံတွေ ကိုအောက်ပါလင့်တွေ နဲ့ လေ့ကျင့်ပါ ။ ရေတွက်ပုံ ၁၁ မှ စပြီး ခက်ခဲ သဖြင့် ထပ်မံ ရှင်းပြသွားပါမည်။
ဂဏန်း ရေတွက်ပုံများ Les Chiffres ( လေရှိဖ် )
လိုက်ပြီး ရွတ်ဆိုပါ ၊ ချရေးပြီး အလွတ်ရအောင် လေ့ကျင့် ပါ